As of Tue, 02 Jun, 2020 16:20
सरकारले ल्याएको बजेटप्रति समर्थनभन्दा बढी आलोचना भइरहेको छ । संसदीय अंकगणितका कारण सदनबाट पारित नै भए पनि यसमाथि सरोकारवालाको टिप्पणीका आधारमा भन्ने हो भने यो बजेट न अहिलेको संकट समाधानका लागि कामयावी हुनसक्छ न भोलिको अपेक्षा देखाउन नै सफल देखिन्छ । त्यसैले यो भन्न सकिन्छ नेपाली अर्थतन्त्रको गति र दिशा अनिश्चित छ अर्थात कोरोनाले जता डो¥याउँछ, उतै अघि बढ्ने अवस्था छ । सरकारले अर्थतन्त्रको ओरालोलाग्दो अवस्थालाई रोक्न काँध थाप्न सकेन भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निजी क्षेत्रको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार त्यो भूमिकामा पनि सफल सफल देखिएन ।
सरकारले लकडाउन फेरि थपेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउन आठौंंपटक थप गरेर जेठ ३२ गतेसम्म पु-याइएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँग जनताको असन्तुष्टि बढेको छ भने यसले विद्रोहको वातावरण बनिरहेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाइ जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको र लकडाउनलाई मात्र कोरोना नियन्त्रणको अचुक अस्त्र मानिरहेको सरकारको शैलीविरुद्ध आम जनताको असन्तुष्टि स्वाभाविक पनि छ । सुरुवाती दिनमा लकडाउन गर्ने सरकारी निर्णयको खुलेर स्वागत गर्नेहरू नै अहिले बिनाआधार लकडाउन थप्दै जाने सरकारको निर्णयलाई अर्कमण्यताको उपज भन्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था प्रतिविम्बित गर्न सकेन । फागुनसम्मको तथ्यांकका आधारमा प्रस्तुत गरिएको सर्वेक्षणले चैतपछिको बिकराल आर्थिक स्थितिको सम्बोधन गर्न नसक्नु प्राविधिक रूपमा गलत नभए पनि समग्रमा भने सर्वेक्षणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । कोरोनाले आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको र मुद्रास्फीति बढेको प्रक्षेपण समावेश भए पनि अन्य सूचकांकका बारेमा सम्बोधन हुन सकेको पाइँदैन । यसर्थ, यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणलाई अर्थतन्त्रको ऐना मान्न सकिने अवस्था रहेन ।
मुलुक यतिबेला कोरोना महामारीमा छ । कोरोनाभाइरस अर्थात कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र थलिएको छ र आम उपभोक्ता, व्यवसायी सबैजसो प्रभावित छन् । केही व्यवसायीले सीमित परिमाणमा व्यवसाय गरिरहे पनि अर्थतन्त्र पूर्णतः स्थिर अथवा ओरालो लाग्ने अवस्थामा छ । सरकारको ठूलो स्रोत कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजनमा केन्द्रित भइरहेकाले अपेक्षाकृत आर्थिक प्याकेज पनि आउन सकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट निराश आर्थिक क्षेत्रको झिनो आशा भने बिहीबारको बजेटसँग छ । तर, त्यति ढुक्क हुने अवस्थासमेत देखिँदैन । यसरी अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरू संकटमा रहेको बेला मुलुकले ठूलो राहतको आवश्यकता महशुस गरिरहेको छ ।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संख्यात्मक रूपमा कमजोर छ । अढाई वर्षअघि वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी निर्वाचनपछि एकीकरण भएसँगै मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक बनेको वहुमतप्राप्त वाम सरकारले कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाउन अनेकौं प्रयत्नहरू गरिरह्यो । संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छँदाछँदै दुईतिहाई मत पु-याएर प्रतिपक्षविहीनताको अभ्यास गर्न तत्कालीन समाजवादी फोरमलाई सरकारमा भित्र्याइएको थियो । आन्तरिक मतभेदपछि फोरम सत्ताबाट बाहिरिए पनि यस पार्टीलाई फुटाइ पुनः दुईतिहाई पु-याउन मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेका बेला हठात् अध्यादेश ल्याएर सरकारले आफ्नो निरंकुश चरित्र उजागर गरेको धेरै भएको छैन ।
सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गर्ने बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आन्तरिक स्रोत अर्थात राजस्वले साधारण खर्च धान्न नै निकै समस्या देखिएकाले दातृ निकाय र विकास साझेदारमै निर्भर हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त कोरोना महामारीबीच बजेट ल्याउने वाध्यता र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौतीलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कसरी पार लगाउँछन् भन्ने सर्वत्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । त्यसै पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने दबाबमा रहेका अर्थमन्त्रीले खुम्चिँदै गएको सरकारको स्रोत तथा वाह्य स्रोतप्रतिको अनावश्यक भरोसाबीच कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ । राजनीतिक दबाबका सामु गत वर्षदेखि नै निरीह देखिएका अर्थमन्त्रीले यस वर्ष पनि त्यो भूल दोहो¥याए भने मुलुकका लागि बिडम्बना हुनेछ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन मुलुकमा लकडाउन गरिएको दुई महिना पूरा भएको छ । एक्कासी भएको लकडाउनले मानिसको दैनिक जीवन केही असहज भए पनि यो जरुरी थियो र यसले कोरोना नियन्त्रणमा धेरै सफलता पनि हासिल गरेको हो । लकडाउनले सामाजिक र भौतिक दूरीको आवश्यकताका सम्बन्धमा पनि जनतालाई सचेत गराउन सफल भएको छ । तर, लकडाउन स्थायी समाधान पक्कै होइन र यसका सकारात्मक परिणामसँगै दुश्प्रभाव पनि उत्तिकै छन् ।
सरकारले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि मुलुकभित्र यसको स्वागत र प्रशंशा भइरहेको छ । तर, छिमेकी भारतले भने यसलाई सहज रूपमा लिन सकेको छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयले बुधबार साँझ वक्तव्य जारी गरेर यसमा आपत्ति जनाएसँगै भारतीय मिडियामा पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको कुरामा कुनै अचम्म छैन किनकि भारतले एकतर्फीरुपमा नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि तत्कालै यो मामला वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान गरौं भनेकै हो । तर भारतले नेपालको कुरा सुनेन । अहिले भारतीय विदेश मन्त्रालयले वार्ता गरौं भन्नुलाई त्यसैले स्वभाविक नै मान्नु पर्दछ ।
नक्सासँगै भूमिमा स्वामित्व
अन्ततः तीव्र दबाबपछि सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । भारत सरकारले जवर्जस्ती आफ्नो भूमि दावी गरी स्वामित्वसमेत स्थापित गरिसकेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो भूमिसहितको नक्सा जारी गरेर यसरी प्रतिक्रिया जनाउनु स्वाभाविक र स्वागतयोग्य छ । नेपाली भूमि भए पनि विगतमा त्रुटीवश नेपालको नक्सामा नरहेको कारणले भारतले यस भूमिमा दावीमात्र गरेन, यही भूमिमा बाटो खनेर चीन जोड्ने सडकसमेत निमाण गरेको छ । भारत सरकारले यो सडकको उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाल सरकार ब्युँझियो त्यो पनि जनआक्रोश बढ्दै गएपछि मात्र । यसरी नेपालका विभिन्न कालखण्डमा बनेका सरकारहरूको अर्कमण्यताका कारण भारतले दावी गर्दै आएको भूमिमा स्वामित्व कायम गर्ने बाटो खुलेको छ र अबका ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
रेमिट्यान्सको विकल्प तयारी गर
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को प्रभाव विश्वव्यापी भएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा यसको बहुआयामिक असर देखिएको छ । आर्थिक रूपमा साधन स्रोत सम्पन्न मुलुकले समेत यसबाट उत्पन्न चुनौती समाधान गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुकले अझ बढी चुनौती सामना गर्नु स्वाभाविक नै हो । नेपालका लागि वैदेशिक मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत मानिएको रेमिट्यान्स घट्न सुरु भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले पठाउने मुद्रामा गिरावट देखिन सुरु भइसकेको अवस्था छ । साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई अपमान नगर
मुलुक यतिबेला आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट निर्माणको चरणमा छ । संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस चलिरहे पनि सरकार भने बजेट निर्माणमै व्यस्त छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि १० दिनमात्र बाँकी रहेकाले सरकारको व्यस्तता स्वाभाविक पनि छ । खासगरी यस वर्ष कोरोना संकटले जनस्वास्थ्य र जनजीविकाका क्षेत्रमा ठूलो संकट ल्याएकाले अर्थ मन्त्रालयले सुझबुझपूर्ण ढंगले बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अर्कोतर्फ कोरोना र लकडाउनबाट भएको क्षतिको आकलनसमेत नभइसकेको र यो संकट कहिलेसम्म तथा कुन रूपमा लम्बिन्छ भन्ने एकिन गर्न कसैले नसक्ने भएकाले बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण पनि छ ।
आशा जगाउन असफल
मुलुकमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको घटना दिनदिनै बढिरहेको छ । कोरोना आफैंमा विश्वव्यापी समस्या भएकाले सबैजसो मुलुक संकटमा छन् । यसको प्रभाव मानिसको स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नभइ यसको प्रसार नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै अभुतपूर्व संकटमा छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकहरूले यस्तो संकट केही लामो समयसम्म थेग्न सके पनि नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले यसलाई लामो समयसम्म धान्नसक्ने अवस्था छैन । उत्पादनका क्षेत्रहरू ठप्प रहेको र सेवा क्षेत्र त झन् शून्यसरह भइरहेको अहिलेको अवस्थामा जनस्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिनुको कुनै विकल्प छैन ।